ekhaya - NDINGU-YEMEN
amawaka abantu ashiyekile
Indlela, ulwandle, isibhakabhaka
Indlala kunye nezifo ngezigidi
Ukunqongophala kokutya namayeza
Batshabalalisa kwaye babulala abantu
Nceda ukhethe ulwimi lwakho
Isishwankathelo Yemen imfazwe
in 2015 kwaye emva kokuba umongameli yokurhoxa Yemen kunye wabalekela e Yemen, imfazwe olungalinganiyo nxamnye Yemen welungu Saudi Arabia kunye United Arab Emirates. Oorhulumente yaseYurophu American kwabangela zobubi nxamnye nabantu ukuzikhusela Yemeni apho babulawa amawaka abantwana zamajoni, ngokuthengisa izixhobo kunye nokuxhasa Saudi Arabia endaweni ekuthinteleni ekufumaneni kulo mba. Ezi macala nje kuphela esihlasela zomkhosi kodwa Saudi Arabia eyirhawula umhlaba, umoya, nolwandle e Yemen ukuze ukuvala ekungeneni ukutya kunye neziyobisi ukuya elizweni engozini ubomi izigidi zabantu. Ngokutsho iingxelo ezivela kwimibutho yezizwe, ezi zenzo zolwaphulo-mthetho ibe yeyona ntlekele ingendawo kwezabantu kule minyaka idlulileyo idlulileyo yabangela indlala kwaye yaqala izifo ezifana nekholera.
Kunye ukukhululwa iindaba kunye nemifanekiso ezi zolwaphulo kule website, uye wazama ukwazisa abantu bezi zenzo neyathi sikhatshwe iCity arhente iindaba Saudi-exhaswa, ukuphelisa le mfazwe olungalinganiyo ngu uqhankqalazo ehlabathini lonke.
Nceda ufake imeyile yakho ukuze ugcine up kunye iindaba zakutshanje nokuxhasa abantu Yemeni
Ngaba yindawo yabantu yokunceda abantu base-Yemeni ngokuchasene nezenzo zolwaphulo-mthetho zase-Saudi Arabia kunye nokuphelisa ukungqingwa kwayo okwenziwe iminyaka emininzi okubanga ubomi bezigidi
IAMYEMEN.COM © 2022 Onke Amalungelo Agciniwe.